CeleLove, Author at CeleLove - Page2of 59
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ချစ်သူဆီက လိုချင်ကြတဲ့ အရာလေးတွေ
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ချစ်သူဆီက လိုချင်ကြတဲ့ အရာလေးတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ထက်မြက်ကြံ့ခိုင်တဲ့ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ချစ်ရသူဆီကနေပြီးတော့ ဂရုစိုက်ကြင်နာမှုလေးတွေ လိုချင်ကြသူချည်းပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ချစ်သူဆီကနေ တစ်ခြားတန်ဖိုးကြီးအရာတွေထက် ဒီအရာလေးတွေကိုပဲ ပိုလိုချင်တပ်မက် ကြတာပါနော် …။ (1) ချစ်ခင်ကြင်နာမှု ကိုယ့်ချစ်ရသူဆီက ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကို မလိုချင်တဲ့သူရယ်လို့တော့ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ချစ်သူဆီကနေ […]
လက်မ ကောက်တဲ့သူနဲ့ ဖြောင့်တဲ့သူများ၏ စိတ်နေသဘောထား ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာ ၊ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဗွေရာနဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရောင်တွေဟာ ကိုယ့်အကြောင်းပြောပြနေတယ်ဆိုတာက ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လက်မရဲ့ ပုံစံက ကိုယ့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုရင်ရော သင်ယူံမလား …။ တစ်ချို့သော လူတွေ လက်မထောင်တဲ့အခါ လက်မက ဆန့်နေပြီး တစ်ချို့သော […]
လက်ဆေးတာ mask တပ်တာအပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဖို့ လုပ်သင့်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်များ
လက်ဆေးတာ mask တပ်တာအပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဖို့ လုပ်သင့်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်များ လက်ဆေးတာ mask တပ်တာ တော့ ဟုတ်ပါပြီ C0VID – 19 ကို ကာကွယ်ဖို့ လုပ်သင့်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက် တွေ ရှိပါ သေးတယ် …။ ထမင်းဆိုင် […]
နိုက်ကလပ်နှင့် ကေတီဗွီများ ပိတ်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ညွှန်ကြား(ရုပ်သံ)
နိုက်ကလပ်နှင့် ကေတီဗွီများ ပိတ်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ညွှန်ကြား(ရုပ်သံ) နိုက်ကလပ်နဲ့ ကေတီဗွီတွေ ပိတ်ဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်ပြီလို့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ “ပိတ်ဖို့ကတော့ ညွှန်ကြားလိုက်ပြီ။ အဓိကကတော့ ကာရာအိုကေနဲ့ နိုက်ကလပ်နဲ့ပဲ။ ဘားတော့ မပါသေးဘူး”လို့ သူကဆိုပါတယ် … ။ တရုတ်ပြည်ဝူဟန်မြို့က […]
ဟိုက်ဂျက်ကားလေးဖြင့် ခရီးဝေးသွားတတ်သော မိတ်ဆွေများ သတိပြုရန်
ဟိုက်ဂျက်ကားလေးဖြင့် ခရီးဝေးသွားတတ်သော မိတ်ဆွေများ သတိပြုရန် မြန်မာပြည်မှာ အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဟိုက်ဂျက်ဟုခေါ်သော အပေါ့စားကုန်တင်ယာဉ်ငယ်အကြောင်း သိထားသင့်သောအချက်များကို လေ့လာနိုင်ရန်ဖြန့်ဝေခြင်းပါ …. ။ အင်ဂျင်ပါဝါ ၆၆၀ စီစီ အင်ဂျင်ကိုဘေးစောင်း တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် လည်ပတ်နှုံးအလွန်ကောင်းပါတယ် …. ။ အပေါ့ဆွဲမှာဆိုင်ကယ်ကဲ့သို့သွက်ပါတယ် …. ။ ကုန်ပါရင် (သိုမဟုတ်) […]
ပန်းများလှိုင်လှိုင်ပွင့်စေဖို့ နဲ့ ပန်းတာရှည်ခံအောင် ဒီလိုလုပ်ပါ
March 17, 2020 CeleLove 0
ပန်းများလှိုင်လှိုင်ပွင့်စေဖို့ နဲ့ ပန်းတာရှည်ခံအောင် ဒီလိုလုပ်ပါ ပန်းများပွင့်စေဖို့ နဲ့ ပန်းတာရှည်ခံအောင်အတွက် ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ အပင်မသန်ရင်နေ ပန်းတွေပွင့်နေရင်ကို ပျော်နေပါပြီဆိုတဲ့ ပန်းချစ်သူတို့အတွက် ပန်းပွင့်စေတဲ့ အားဆေးတွေပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ပန်းဆိုပေမယ့် ဓါတ်ေသဘာအရ အသီးနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလျင်းသင့်သလို ချဲ့ပြီး သုံးလို့ ရပါတယ်နော် …။ (၁) […]
သင့်ကိုညဘက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေမယ့် သောက်စရာ (၅) မျိုး
သင့်ကိုညဘက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေမယ့် သောက်စရာ (၅) မျိုး အလုပ်တာဝန်တွေကများ၊ တွေးစရာတွေကလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုများ၊ စိုးရိမ်စရာတွေကလည်း ရှိနေတာကြောင့် ညဘက်တွေမှာ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်တာက အမြဲလိုလိုပါပဲ။ ဒီတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေကို ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် ညအိပ်ခါနီးသောက်သင့်တဲ့ သောက်စရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) နွားနို့ နွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်ကို […]
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် တကယ် ချစ်မိသွားရင်…
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် တကယ် ချစ်မိသွားရင်… တွေ့ခါစက သင်အရမ်းလှနေလို့ ချစ်မိသွားတယ်။ဒါပေမယ့် ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက်သင် ညစ်ပတ်ပေစုတ်နေလဲ ဂျီးပေမလေးဆိုပြီးအပြုံးမပျက်ဘဲ ချစ်နေလိမ့်မယ်။သင့်အကြောင်း မသိသေးဘဲ ချစ်မိတယ် …။ ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက် သင်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးပစ်ခွာမသွားပဲ ပြုပြင်ယူလိမ့်မယ်။သင်ရည်းစားရှုပ်ခဲ့တာကို လိမ်ထားမယ်။ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက် သင်ရှုပ်ပွေတာတွေ သိခဲ့ရင်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေ ဗွေမယူဘဲ ခွင့်လွှတ် ပေးပါလိမ့်မယ် …။ သင်သူ့အပေါ်အရမ်းဆိုးပြီး အနိုင်ကျင့်နေရင်တောင် […]
ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကို ချစ်သူတော်ထားရတာ ထီပေါက်တာထက်ကိုကံကောင်းပါတယ်
ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကို ချစ်သူတော်ထားရတာ ထီပေါက်တာထက်ကိုကံကောင်းပါတယ် သင့်အပေါ်ကို အချစ်စစ် အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်ပေးနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်ဆိုတာ သင့်အတွက် အရမ်းကံကောင်းပါတယ် …။ သင့်အနေနဲ့ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကို အမှန်တကယ် တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို မိန်းကလေးမျိုးလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …။ ၁။ […]
တစ်နေ့ ဖရဲသီး (၁) စိတ် စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်နေ့ ဖရဲသီး (၁) စိတ် စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးများ ဖရဲသီး က ဗီတာမင် C ၊ ဗီတာမင် D၊ lycopene နဲ့ citrulline စတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအသီးက လတ်ဆတ်ပြီး အရည်ရွန်းရုံတင်မက […]